I-iPhone SE entsha ifika (2020), "iindleko eziphantsi" zika-Apple | IPhone iindaba
Ukufika kwe-iPhone SE entsha (ngo-2020), "yexabiso eliphantsi" lika-Apple
UMiguel Hernandez | | iPhone SE, Izaziso
Ngomhla wamashumi amathathu ananye kwinyanga yoKwindla ngo-31, i-iPhone SE yafika kwintengiso, ingaphakathi elihlaziyiweyo le-iPhone 2016s eza kugubungela loo marike apho iApple ingenabukho, ophakathi kuluhlu lweefowuni eziphathwayo. Ngexabiso elikude kakhulu kwiimodeli zangoku, yaba yeyona nto ithengiswa ngokukhawuleza ngaphandle kokugxekwa, nangona kunjalo, kungekudala yachaphazeleka bubungakanani bescreen sayo kunye nokuzimela kwayo okulinganiselweyo.
U-Apple usandula ukwazisa i-iPhone SE (2020), indlalifa efanelekileyo kwi-iPhone SE, isebenzisa ifomula esele izise impumelelo yenkampani. Sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-iPhone SE entsha (2020), ixabiso layo, amanqaku ayo kunye nazo zonke iindaba.
1 Uyilo: Indlela yokuPhumelela
2 Isixhobo: IWundlu ngaphandle, ingcuka ngaphakathi
3 Isikrini esaziwayo kunye nekhamera
4 Ixabiso lokwazisa kunye nokufumaneka
Uyilo: Indlela yokuPhumelela
Ukuba ibisebenza ngelo xesha, asifumani sizathu sokuba kutheni ingasebenzi ngoku. Ngokucacileyo sibhekisa kwinto yokuba uApple wayefuna ukuphinda asebenzise uyilo lwee-5s ze-iPhone kwiminyaka eyi-SE eyadlulayo. Ngokucacileyo oku kucinga ukonga okubaluleke kakhulu kwiindleko zoyilo kunye nokwenziwa kwesixhobo, Iziphumo ezingathandabuzekiyo ekunciphiseni okukhulu kwexabiso, kukuba iApple ihlala isebenzisa ezona zinto zisemgangathweni ophezulu ekwenziweni kwezixhobo zayo kwaye ukuyila akukho lula.
Ngokwenxalenye yayo, le iPhone SE (2020) izuza njengelifa uyilo lwe-iPhone yokugqibela eyayineqhosha lesazisi seTouch. Ngaphandle iphantse yafana, I-Apple ithatha inyathelo lokubuyela kudityaniso lwe-ID yobuso kodwa ayishiyi i-iPhone SE (2020) kuphela, kwaye i-iPad 10.2 ilandela ipateni efanayo yezakhelo kunye neqhosha lasekhaya. Ngokwenxalenye yayo sinealuminiyam ye-chassis, iglasi ngasemva kunye nesenzi sensor esinye kwikhamera, njengoko kwenzekayo ngexesha nge-iPhone XR. Isixhobo Iya kuthengiswa ngombala omhlophe / wesilivere, ongwevu wasendaweni kunye nobomvu obomvu wephulo lenkampani leMveliso (RED). Ewe zonke izixhobo zabelana ngaphambili ngombala omnyama.
Malunga nokumelana namanzi, i-iPhone 8 apho le nguqulo izuze ilifa kuyilo lubonisa amanzi aqinisekisiweyo e-IP67, ukutshiza kunye nokumelana nothuli, into ethathelwa ingqalelo ihleli kolu hlelo lutsha lwesixhobo. Ngokuqinisekileyo, kwinqanaba loyilo iApple khange ibeke emngciphekweni omkhulu, kwaye nangona iqhubeka ukuzibonakalisa njengemveliso eyaneleyo kwimigangatho yokuvelisa, sineemvakalelo ezixubeneyo malunga nokubuyela kwiphaneli yaloo milinganiselo ineefreyimu kunye neqhosha lomzimba, ngaba sijikile iminyaka ebuyayo ngesiquphe?
Isixhobo: IWundlu ngaphandle, ingcuka ngaphakathi
Le iPhone SE (2020), njengoko yenzekileyo kumhla wayo nge-iPhone SE, ihlala ngaphakathi kakhulu kunokuba besinokuyicinga, kwaye loo nto kukuba iApple ayivelisanga esi sixhobo ukwamkela abasebenzisi abatsha abathandabuza ukutyala amanani amane kwisixhobo, kodwa ibenza ukuba baphile, njengayo yonke into abayenzayo. Kungenxa yoko le nto iApple igqibe kwelokuba ibeke entliziyweni yale iPhone SE (2020) Iprosesa ye-Apple A13, iyafana inyusa i-iPhone 11 Pro kunye ne-iPhone 11 Pro Max.
Amandla ngobuninzi ngokungabikho kwedatha yememori i-ram iApple igcina ngokungathandabuzekiyo kodwa yonke into ibonisa ukuba zii-3GB njengakwimo ye-iPhone XR. Ngokwenxalenye yayo, siya kuba neenguqulelo ezintathu zokugcina eziqala kwifayile ye- I-64GB, imodeli ephakathi kunye ne-128GB kunye ephezulu ne-256GB oko kuyakwenyusa ixabiso labo ngendlela elinganisiweyo ngokupheleleyo. Oku kukwaphambili ngokubhekisele kugcino olunikezelwa yi-iPhone 8 kwikhathalogu yayo ukuza kuthi ga ngoku, ukuqala kwisiseko se-32GB, ngokucacileyo ayonelanga ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla namhlanje. Ngaphandle kokuthetha, njengesiqhelo, asinayo inkumbulo eyandisiweyo.
Isikrini esaziwayo kunye nekhamera
Sinayo ngasemva Inzwa enye ye-12MP ene-1.8nm f / 1,4 aperture kunye ne-classic Dual-Tone Flash ukuba inkampani yaseCupertino kudala isakha. Ngokucacileyo sinomfanekiso ozinzileyo wokuzinza kunye Smart HDR ukuphucula umgangatho womxholo. Sinezinto ezithile zesoftware ekwabelwana ngazo ngeemodeli ezintsha zeApple kunye nokurekhodwa kwe4K 60FPS. Ikhamera eyaneleyo, kodwa akukho frills. Kukwatsho okufanayo ngaphambili MP ye-7 ene-f / 2.2 ukuvula kunye nokurekhodwa kwe-1080p kwi-60FPS.
Isikrini se 4,7 intshi inesisombululo seHD njengoko kwenzekayo ngexesha kwi-iPhone 8. Ifumana zonke iimpawu zayo njengo-TI-rue Tone, amandla e-Haptic Touch (siphulukana ne-3D Touch) Kwaye iseyeyona yeepaneli zeLCD ezibalaseleyo kwintengiso ngokubhekisele ekuveliseni umbala kunye nokukhanya. Kula manqanaba, i-iPhone SE (2020) ayiqhubeli phambili nangayiphi na into ngokwe-iPhone 8 ukuba sithetha ngescreen, isandi kunye nokuzimela. Asinayo idatha ethile kwi-mAh yokuba ibhetri ye-iPhone inyuka (2020) kodwa sicinga ukuba iya kuba 2691 mah ye-iPhone 8, okanye ngaba iApple iya kuba nakho ukuyinyusa?
Ixabiso lokwazisa kunye nokufumaneka
U-Apple kuye kwafuneka enze "intetho" esecaleni kwesi sihlandlo ngenxa yemeko yentengiso yangoku kunye nezithintelo ezingxamisekileyo kwezempilo kwihlabathi jikelele esihlangabezana nazo. Ngenxa yezi zizathu sele sinokufikelela ngokupheleleyo kulwazi malunga nesixhobo kunye nokuthengwa kwaso kwiwebhusayithi esemthethweni yeApple. Nokuba kunjalo, ngekhe ubenakho ukuya kwivenkile ngokwenyani uyokufumana iyunithi yakho, kungoko okokuqala kwiminyaka emininzi iifoto zemigca emininzi kwiVenkile yeApple iyakuthintelwa nganye nganye ukwaziswa.
I-iPhone SE (2020) inokugcinwa ngo-Epreli 17 kwaye ukuhanjiswa okokuqala kuya kwenziwa ngo-Epreli 24. La ngamaxabiso alindelekileyo:
I-iPhone SE (2020) -64GB: 489 i-euro
I-iPhone SE (2020) -128GB: i-euro ezingama-539
I-iPhone SE (2020) -256GB: i-euro ezingama-589
Bobabini abakhuseli bekhusi be-iPhone 8 kunye namatyala anemodeli yangoku aya kuhambelana ngaphandle kohlengahlengiso oluncinci lobuhle apho isixhobo besifakwe njengoko kwenzekile ngaphambili nezinye izixhobo zenkampani. Ngoku kuhlala kubonakala ukuba i-iPhone SE (2020) ngokwenene iyeyona ithengisa kakhulu enokulindelwa kuyo. Sithatha eli thuba ukukhumbula oko Uya kufumana unyaka wasimahla weApple TV + yokuthenga le mveliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ukufika kwe-iPhone SE entsha (ngo-2020), "yexabiso eliphantsi" lika-Apple
UEva uhlaziya usetyenziso lwe-iOS ngezinto ezintsha, uyilo, kunye nokuvumelanisa
IPodcast 11x31: I-Retro ikwifashoni